Home Wararka Faarax Macalin”Ciidamada Keyna dhibaatooyin kala duwan ayeey ka geystaan Soomaaliya”
Faarax Macalin”Ciidamada Keyna dhibaatooyin kala duwan ayeey ka geystaan Soomaaliya”
Siyaasiga Faarax Macalin ayaa sheegay ciidanka dowladda Kenya ee aan qeybta ka aheyn hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM inay dhibaatooyin kala duwan ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay inay kordheen dilalka iyo gabood falada ciidanka Kenya ka geystaan Soomaaliya, wuxuu tusaalo ahaan u soo qaatay dhawr dhacdo oo ciidanka Kenya ay ku dhibaateeyeen dad rayid ah oo ku sugnaa degaano ku dhaw xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagan.
Faarax Macalin ayaa sheegay dhibaatooyinka ay geystaan ciidanka Kenya in sidoo kale ay qeyb ka tahay inay burburiyeen xarumo isgaarsiineed, isaga oo tilmaamay in ilaa hadda aanay jirin cid arrimahaasi wax ka qabatay.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu ka dalbaday inuu qaado talaabo uu wax kaga qabanayo dhibaatada ay wadaan ciidankiisa, islamarkaana uu magdhow ka bixiyo dhibaatada ciidanka Kenya ay u geysteen rayidka.
Ciidanka Kenya ee sugan Soomaaliya gaar ahaan dhanka xuduuda ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay geysteen dhawr dhacdo oo ay ku dileen rayid, islamarkaana ay ku gubeen shirkado isgaarsiineed, weli ma jirto cid kula xisaabtantay.
Previous articleMaamulka Galmudug oo Xukun ku riday Wariye ka hawlgalayay G/Galgaduud
Next articleBanaanbax Rabshada Wato oo Looga soo horjeedo Maamulka G/Banaadir oo ka soconaya Muqdisho.
Agaasimaha Madaxtooyada oo ku howlan abaabul dagaal sokeeye oo ka dhaca...
Taliyaha Ciidanka oo booliska oo ka hadlay saxmada wadooyinka muhiimka ah...